Ny fitaovam-pambolena eto an-tany | Reef Resilience
Ny faritr'ora-madinika amoron-dranomasina izay miorina amin'ny tany, fantatra ihany koa aloha-situ pitsaboana, dia fomba amam-panao mahazatra indrindra amin'ny fampielezan-janaka amin'ny haran-dranomasina. Na izany aza dia ampiasain'ireo mpihazakazaka maromaro kokoa izy ireo ho toy ny fitaovana hafa ho an'ny toeram-pambolena sy fiompiana an-dranomasina mba hampielezana ny sombintsombin'ny haran-dranomasina. Noho ny ampahany betsaka amin'ny varotra akquarium, maro ireo fandrosoana no natao tamin'ny teknikam-pambolena tena tsara izay nampiroborobo ny fananganana korontana mahomby amin'ny tany. Misy literatiora be dia be momba ny fambolena karakarao ao amin'ny aquaria. ref
Ny kolontsaina Orbicella dia mitombo eo amin'ny toeram-pivarotana entana an-tanindrazana taorian'ny teknolojia mikarenjy. Sary © Dave Vaughan
Ny tombontsoa goavana amin'ny fitaovam-pambolena eto an-tany dia ny fahaiza-manaon'ny mpitsabo mba hanamora ny tontolo iainana ary hampiroborobo ny fiatoana sy ny fitomboan'ny vatohara izay mitranga mandritra ny taona. Amin'ny rafitra avo lenta, ny toe-javatra dia afaka mitoetra ho miorina amin'ny alàlan'ny fiovan'ny vanin-taona, oram-baratra, ary ny hain-trano na ny fandotoana. Ankoatra ny fiarovana amin'ny alàlan'ny tontolo iainana dia mety ho voaro amin'ny fanimbana biolojika toy ny biby mpiremby, ny fiompiana, ny alim-bary, ary ny aretina raha ampiasaina ny karazan-tsakafo sy ny fikojakojana.
Ny rafitra mifototra amin'ny tany dia mamela ny haran-dranomasina hampiely ny tahiry kely sy ny lavanila avy amin'ny volavolan-tsakafo novolena. Ny rafitra mifototra amin'ny tany dia mety ho tena mahasoa ho an'ireo vatohara na tandindonin-doza mety hitranga ao anaty tranokala na faritra. Ohatra, ny teknika iray antsoina hoe "micro-fragging" dia nampiasaina tany amin'ireo tanimbary nateraky ny tany, izay nipetrahan'ireo zanatany sokatra ho an'ireo sombintsombiny ny haben'ny polypes. ref Farany, ny rafi-pitantanana landy dia azo ampiasaina amin'ny fanandramana, ny banky génie, ny fananganana firaisana ara-nofo amin'ny tany, ny famonoana ny génotypes, na ny toeram-piompiana vonjimaika.
Ny fiahiana mahazatra indrindra amin'ny akquaria ao amin'ny tany dia lafo be, ary tsy fahombiazana na tsy fahombiazan'ny fatiantoka mety hiteraka fahavoazana goavana amin'ny tahiry haranify. Noho izany, mila fitaovana za-draharaha matihanina izay fitaovana ampiasaina amin'ny simia sy ny fambolena akoholahy ny mpamboly landy. Ny mpitsabo ireo rafitra mifototra amin'ny tany dia tokony hiantoka fa tsy misy aretina na biby tsy teratany nafindra teo anelanelan'ny aquaria sy ny vatohara voajanahary. Noho izany antony izany, ny sambon-kazo rehetra izay te-hamboly dia tsy maintsy arahina araka ny torolalana azo atao. Ankoatra izany, ny fanombanana ara-pahasalamana dia tsy maintsy ataon'ny mpitsabo iray nankatoavina alohan'ny hipoahan'ny vatany.
Famolavolana kodiarana sy fiheverana
Rehefa mamaritra ny toerana misy ny teratany iray monina ao an-tanindrazana, dia ny hevi-dehibe dia ny fikarakarana ny trano famakiam-boky "akaiky" amin'ny faritry ny tanimboly ary afaka mahazo loharano azo antoka ho an'ny rano ranomasina tsara. Ity loharano ity dia mety mivantana mivantana avy any an-dranomasina, avy amin'ny rano sira tsara, na mifangaro amin'ny toerana. Tahaka ny toe-javatra foana, dia misy varotra mifandray amin'ny loharano sy ny karazana loharano. Anisan'izany ny fanombohana sy ny fandaniana, ny kalitao sy ny fitsaboana, ary ny fahafahana manova ny rano araka izay ilaina. Raha ampiasaina amin'ny rano na rano mandeha amin'ny rano ny rano, dia mety mbola ilaina ny misafidy ny rano alohan'ny fampiasana azy. Ity fitsaboana ity dia mety ahitana ny fanodinkodinana, ny fifehezana ny mari-pana, ny fanesorana ny amniaka, ny fitrandrahana calcium, na ny fanitsiana ny mari-pamantarana ny rano. Raha ampiasaina ny rafitra indray mandeha dia misy ny sivana biolojika, ny proteine ​​skimmer, ny loharanon'ny kalcioma sy ny alkalinea (toy ny calcium reactor), ny fifehezana ny hafanana, ny loharano ahodin-drivotra sy ny rano, ary ny rafitra matanjaka azo antoka.
Ny fametrahana ny rafitra rano dia manan-danja amin'ny fahombiazan'ny rafitra mifototra amin'ny tany, ary ahitana singa toy ny pumps, valantsoratry ny piping, ary fiara. Ny habe sy ny endrika fonosana, fitaovana ampiasaina, ary ny rafitra manontolo sy ny rafitra drainage dia manakiana koa. Ny toeram-ponenana rehetra dia tokony hikarakara ny fahazavana sy ny hafanana amin'ny alàlan'ny famaranana (raha ivelany).
Fepetra momba ny kalitaon'ny rano
Ny fepetra momba ny kalitaon'ny rano no tokony hiorina sy hajaina amin'ny ambaratonga tsara indrindra ho an'ny fitomboan'ny haran-dranomasina. Ny singa manan-danja toy ny tara-pahazavana (PAR), ny fanaraha-maso tsara ny mari-pana, ny fiterahana tsy ara-boajanahary, ny fambolena organika, ny satroboninahitra aragonite, ny fisian-tsakafo, ary ny rano dia zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny fitomboan'ny haran-dranomasina. Raha ny fitsipika ankapobeny dia asaina manambara fa raha misy fari-dranon'ny kalitaon'ny rano mandritra ny andro maromaro, dia tokony haverina indray ny paramètres ary hoentina tsikelikely. ref Tokony hitranga isan'andro ny fitsaboana rano raha azo atao, miaraka amin'ny fandaharam-potoana fitsapana farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro. Ireo rafitra fanamafisana izay manara-maso ny kalitaon'ny rano dia mety ilaina fa sarotra ihany koa.
Toeram-pambolena sy fiompiana an-tokantrano ao an-tokantrano ao Mote Marine Lab, Summerland Key, Florida. Sary © Dave Vaughan
Ny tahan'ny rano dia tokony hiova sy hikoriana raha azo atao. Ny haavon'ny rano ambany dia mety hihazona ny vatohara miaina fa hampihenana ny fitomboany, ny sampana, ary ny lanjan'ny skeleta. Ny tank dia tokony hamehy ny volany farafaharatsiny farafaharatsiny 10 isaky ny ora. ref Ny haavon 'ny hazavana dia tokony hitovy amin' ny toeram-ponenana voajanahary izay avy amin 'ny vatohara na avy amin' Ny hafainganam-pandrefesana hafa dia azo ekena, fa mety hampihena ny fitomboan'ny haran-dranomasina ary mitarika olana amin'ny fanamafisana ny fitomboan'ny algônina. Ny herbivores toy ny siny dia tokony heverina ho toy ny fomba hampihenana ny ala ao anaty fiara, ankoatra ny fomba fanesorana boky. Amin'ny ankapobeny, ny herbivore, ny vatolampy mivantana, ary ireo singa hafa momba ny zavamaniry ao amin'ny rafitra aquaria dia tokony hipoitra avy amin'ny faritra iray ihany, toy ny hiparitahan'ny haran-dranomasina.
Ny tabilao etsy ambany dia mampiseho ireo mari-pamantarana kalitao momba ny kalitao mahazatra ao amin'ny toeram-ponenana sy ny toeram-piofanana A. cervicornis (avy amin'ny O'Neil 2015).
Alohan'ny hametrahana ny vatohara any amin'ny lakandran-tany, dia tokony hapetraka mandritra ny iray volana farafahakeliny ny haran-dranomasina avy amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo amin'ny fiara miaraka amin'ireo rafitra fitehirizana rano fisorohana mba hisorohana ny fampifangaroana rano. Aorian'ity vanim-potoana karaantinina ity, ireo vatohara izay azo antoka fa salama (izany hoe, tsy mampiseho marika aretina, fatiantoka, fanadiovana, fanesorana, na parasy) dia mety hifangaro amin'ny vatohara hafa. Ny Corals amin'ny fepetra tsy mety dia tokony hijanona ao amin'ny tranomaizina raha tsy misy ny fepetra tsy ampy mandritra ny iray volana.
Ny sombi-katsaka dia tokony ho azo ampiasaina amin'ny fampiasana fitaovam-pandehanana an-tariby na fitaovana fambolena hafa ho an'ny vatoharan-java-maniry, ary amin'ny fampiasana ny karazana mikrôba mikaroka ho an'ny karazan-karazan-karazan-dranomasina rehetra. ref
Alohan'ny hametrahana vatohara amin'ny fitazonana fiara mifono vy, dia tokony hosotroina sy hodiovina ny fiarandalamby, ny sivana, ary ny fitaovana rehetra mifandraika amin'ny fambolena sy ny fampielezana. Ny Corals avy any amin'ny toerana samihafa (fanjakana, firenena) dia tokony hijanona amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ireo rafitra rano fisintonana manokana mba hisorohana ny fampidirana karazana avy amin'ny toerana samihafa.
Raha mitandrina ny vatohara any anaty fiaramanidina samihafa na any amin'ny rafi-pitaterana rano maromaro, toy ny rehefa manomboka mikarokarena vatohara vaovao na manangona corals avy amin'ny toerana ara-jeografika samihafa, dia mila mitandrina tsara ireo mpitsabo rehefa mikarakara vatokely na mampiasa fitaovana akquaria. Ny fitaovana toy ny borosy, siny, filtri, pumps, na zavatra hafa ao anaty fiara dia tokony hosotroina na hosotroina amin'ny rano madio ary maina alohan'ny hidirana eo amin'ny fiara. Ny hoditra marefo amin'ny rano ao amin'ny lakana dia tokony hosasana amin'ny hafanana mafana tsara mba hisorohana ny mety hiterahan'ny organism toy ny mikraoba eo amin'ny fiara.
Ny sora-baventy mampiseho famantarana ny aretina dia asaina amin'ny alalan'ny fanesorana na fanararaotana ampahany amin'ny zanatany izay marary na voan'ny epoksiaka. Ny fitsaboana amin'ny fanafody koa dia safidy. Tokony hesorina na voatahiry ho an'ny fikarohana ny ampahany amin'ny tazo malemy. Ny kôlônia dia tokony hibahana ao anaty akrarea miaraka amin'ny rafi-pitilanana rano fisintonana mandra-pahatonga azy ireo fa tsy voan'ny aretina aretina mandritra ny fe-potoana iray volana. Ho an'ireo colonies izay tratran'ny aretina ny ankamaroan'ny vatan'ny velona, ​​ny kolony manontolo dia tokony horavana na ho voatahiry ho an'ny fikarohana.
Tokony hotandremana koa ny fepetra fanampiny rehefa miasa amin'ny vatohara izay mampiseho marika aretina na toe-javatra hafa tsy voajanahary. Ny tanana dia tokony hosasana indray amin'ny rano mangatsiaka tsara alohan'ny hikitihan'ireo zanatany hafa. Azo atao koa ny fikarakarana fonon-tanana rehefa miasa miaraka amin'ny vatohara marary na tsy salama ary alaina alohan'ny hidirany amin'ny vatohara hafa. Ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny kamiao miaraka amin'ny vatohara mampiseho famantarana ny aretina na toe-javatra hafa dia tokony hosasana amin'ny vahaolana 5% bleach ary avy eo ny ranom-boasary alohan'ny fampiasana azy any amin'ny aquaria hafa.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitra momba ny fitantanana ho fampandrosoana ny mponina ao amin'ny Acropora Karibeana (pejy 16) manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovam-pitaterana kara-tany: fitaovana azo antoka ho an'ny famokarana sy ny fambolena Acropora cervicornis manokatra fisie PDF